धुर्कोट नयाँगाउँकी एक बेसहारा महिलाकोे वन कार्यालयले बनायो उठ्ठिवास ! – ebaglung.com
धुर्कोट नयाँगाउँकी एक बेसहारा महिलाकोे वन कार्यालयले बनायो उठ्ठिवास !
२०७४ फाल्गुन १७, बिहीबार १५:३०	Top News, थप समाचार
प्रेम सुनार, गुल्मी, २०७४ फागुन १७ । सदरमुकाम तम्घास वजारमा सार्वाजानिक जमिन अतिक्रमण गरेर थुप्रै्र घरहरु बनाईएका छन । सरकारी निकायकै गेट अगाडी यसरी सार्वजानिक जमिन अर्थात खोला माथी घर बनाई रहेको दृश्य यहाँको सरकारी निकायले देखेर पनि नदेखे जस्तो गरिरहेको छ । पैसावाला र सदरमुकामका गन्ने मान्नेहरु विरुद्ध सरकारी निकाय हात हाल्न जोखिम ठानेरै निरही बनेको हो । तर ग्रामिण भेगकी एक वेसहारा महिलाको बन्न लागेको घर यहाँको सरकारी निकायले सुचना टाँस नगरी फौजी आक्रमण शैलीमा भत्काई दिएको छ ।
जिल्ला बन कार्यालय गुल्मी र अर्घाखाँचीको जिल्ला बन कार्यालयले संयुक्त रुपमा प्रहरीको ठुलो दल–बल परिचालन गरी गुल्मीको धुर्कोट गाउँपालिका वडा नम्वर १ नयाँगाउँकी पमिता खनालको बन्न लागेको आरसिसी घर भत्काई दिएको हो ।
उनको घर अर्घाखाँची र गुल्मीको सिमनामा रहेको सार्वजानिक जमिनमा बनाएको भन्दै त्यसरी भत्काईएको ती दुई कार्यालयको दावी रहेको छ । अर्घाखाँचीको मालारानी गाउँपालिका वडा नम्वर ३ को ओखलढुङ्गा भन्ने स्थानमा रहेको उनको घर आधा गुल्मी र आधा अर्घाखाँचीमा रहेको उनिहरुको दावी छ ।
तम्घास सुर्खेत सडक खण्डमा रहेको त्यस ओखलढुङ्गामा वजारिकरणका लागि भन्दै अरु थुप्रैलाई समेत सार्वजानिक जमिन स्थानियले न्युनतम रकममा विक्रि गर्दै र घर बनाउँदै आएका छन् । तर अरुलाई अनदेखी गरिएको छ भने वेसहारा महिला खनालको मात्रै घर भत्काई दिनु स्थानियले सरकारी निकायको नलायकीपनको संज्ञा दिएका छन् ।
मालारानी गाउँपालिका ३ का समाज सेवी हरि जिसीले भने – ठुला बढा र धनी पुँजीपतिहरुले वर्षौँ अघि देखि प्रशस्त सार्वजानिक जमिन अतिक्रमण गर्दा सरकारी निकायले केहि गर्न सकेको छैन तर एउटी श्रीमान बेपत्ता भएर वेसहारा भएकी महिलाको वास उठाउन खोज्नु सरकारी निकायको नलायकीपन नै हो ।
सोही स्थानका कुलप्रसाद खनालले पनि सरकारी निकायको त्यस कार्यको घोर भत्र्सना गरेका छन् । सो गाउँका पुर्व वडाध्यक्ष रोमहर्श खनाल भन्छन्–‘ यि महिलाको वर्षऔं अघि देखि श्रीमान भारतमा बेपत्ता भएका छन् । श्रीमान बेपत्ता संगै उनका जेठा छोराको चट्याङ्गले हानेर मृत्यु भयो । उनले निमेक मजदुरी गरेर दुई छोरी र एक छोरा हुर्काईन ।
तल जंगलको छेउमा असुरक्षित घर भएकोले धुर्कोट गाउँपालिका वडा नम्वर १ ले छफल गरी उनलाई त्यस स्थानमा वास दिएको हो, स्थानिय वासी र जनप्रतिनिधीहरु संग छलफलको वातवरण समेत नमिलाई वन कार्यालयले एकाएक घर भत्काई दिनु ज्यादती नै हो ।
धुर्कोट गाउँपालिका वडा नम्वर १ का वडाध्यक्ष कमल थापाले उक्त जमिन गुल्मीको भएको तर मोटरबाटाको छेउँमा वजारीकरण सुरु भए पछि अर्घाखाँचीका केहि मानिसहरुले दजगजाको लडाई सुरु गरेर उनको घर भत्काईनु राम्रो पक्ष नभएको धारणा राखे ।
नयाँगाउँका समाज सेवीहरु क्रमशः तोमबहादुर जिसी, कृष्णबहादुर पाण्डे, खिमानन्द खनाल र प्रेम जिसी लगायतले पनि ति महिला माथी अन्याय भएको बताए । अर्घाखाँची जिल्ला वन कार्यालयका प्रमुख दिपक ज्ञवालीले उनि विरुद्ध त्यहाँको वन उपभोक्ता समितिले उजुरी गरेपछि भत्काईएको बताए ।
यस्ता थुुप्रै ठाउँमा धेरैले सार्वजानिक जमिन अतिक्रमण गरेका छन् , ति वेसहारा महिलाको मात्र किन ? भन्ने प्रश्नमा उनले भने उनको घर बन्नबाट रोक्न सकिए अरुले बनाउन सुरु नगरुन भनेर यस गरिएको दावि गरे ।
यता सोही कार्यालय गुल्मीका प्रमुख विशाल घिमिरेले पनि वन एैन अन्र्तगत अतिक्रमण रोक्न उनको घर सांकेतिक रुपमा भत्काईएको बताए । पमिताका श्रीमान भक्त खनाल १८ वर्ष अघि भारत हिडे देखि हाल सम्म बेपत्ता छन् । लगत्तै उनका जेठा छोराको २०६१ सालमा घरमै चट्याङ्ग लागेर मृत्यु भएको थियो ।
त्यस पछि २०७१ सालको भुकम्पले घर चर्किएर जोखिममा परेपछि उनलाई नयाँगाउँका समाज सेवीहरुले उक्त सुरक्षित वसोवासका लागि जमिन दिएका थिए । उन यस अघि सम्म सानो छाप्रोमा थिईन । छोरा विदेश गएर केहि कमाएको र आफुले पनि दुनियाँका भाँडा माझेर , ऋण काढेर बनाउन लागेको घर भत्काई दिदा आफु बेहोस भएर ढलेको उनै पिडित पमिता खनालले बताईन । सोमवार घर भत्काए देखि उनि हाल सम्म सडकमा बसेर रँोई रहेकी छन् ।
उनका दुई छोरीहरु पनि आम जस्तै सडकमा बसेर आफुहरुको वोलि दिने मान्छे कोही नहुँदा हेपेर घर भत्काई दिएको गुनासो गर्छन् । पिडित महिला पमिताका अनुसार यता गुल्मीले उक्त जमिन दिए पछि अर्घाखाँचीका शोभाखर खनाल लगायतका केहि मानिसहरु उनले पाएको घडेर मध्ये दश हात जमिन अर्घाखाँचीको पर्छ ५० हजार रुपैयाँ हामीलाई देउ भन्दै आएका थिए ।
उनले भनिन–‘उनिहरु ५० हजार हामीलाई खुस्स देउ भनेका थिए तर मैले नयाँगाउँका समाज सेवी नजुटाई किन दिने भनेर दिईन,अहिले त्यो पैसा मागेको एक महिना नपुग्दै उनिहरु वन कार्यायमा उजुरी दिएर घर भत्काउन लगाई दिए । ’
पैसा माग्नेृ भनिएकाहरु मध्येका शोभाखर खनालले भने आफुहरुले पैसा नमागेको जिकिर गरे । उनले ति महिला संग प्रति प्रश्न गरे मैले पैसा मागेको के प्रमाण छ ? ति महिलाले भने उनलाई फटाहको सज्ञा दिईन् । त्यहाँको एक गिरोह भित्र भित्रै सार्वजानिक जमिन भित्र भित्रै बेच्दै आएको पाईएको छ ।
पमिताकै बन्न लागेको घर नजिकै ३ वटा घडेरी बेचेर घर बनाईएको छ । त्यही सडक खण्डको काम्लेका चौर देखि खनदह सम्म प्रशस्त मात्रमा सार्वजानिक जमिनमा घरहरु बनेका छन । डाँडाकटेरीमा पनि सार्वजानिक जमिनमा धेरैले पक्की घर बनाएका छन् , मालारानी, सुपादेउराली क्षेत्रमा पनि प्रशस्तै सार्वजानिक जमिनमा जनप्रतिनिधीहरुले वस्ती विकास गरेका छन् । यता गुल्मी धुर्कोट गाउँपालिका प्रमुख भुपाल पोखरेलले आफुहरुले पनि यहाँका पमिता खनाल जस्ता प्राकृतिक प्रकोप पिडित र असहाय परिवारलाई सुरक्षित र व्यवस्थीत वस्तीमा सार्ने अभियानका क्रममा उनलाई उक्त स्थानमा जमिन दिएको बताए । उनले थपे तर वन कार्यालयले स्थानिय सरकार संग छलफल नै नगरी उनको घर भत्काउनु भनेको ति कार्यालयको जंगलीराज रहेको महशुस गरेका छौं ।
उनले फेरी त्यो कार्यालय ति महिलाको आएर भत्काउन चुनौती दिदै भने–‘ फेरी आएर त्यस्तै गरे उनिहरुलाई अव जनताले कारवाही गर्ने छन र गाउँ छिर्न दिने छैनन । उता मालारानी गाउँपालिका प्रमुख वालकृष्ण आचार्यले पनि दुवै गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधीहरु संग छलफलको वातवरण गर्नु पर्ने आफुले सुझाव दिएको तर त्यसरी एककासी भत्काउन नहुने धारणा राखे ।
एक्कासी भत्तिनिस्थानिय सरकारको अटेरी गरेको विरुद्ध दुवै जिल्लका वन कार्यालयको चौतर्फी आलोचना भएको छ । धनी र राजनैतिक पहुँच भएकाहरुले जति अतिक्रमण गरे पनि नदेखे जस्तो गर्ने तर पमिता खनाल जस्ता विपन्न र वेसहरा जसलाई वर्षऔ पछि स्थानिय सरकारले सुरक्षित वासको व्यवस्था गरी दिदा पनि वन कार्यालयले हस्तक्षेप गर्नु भनेको कर्मचारीतन्त्र अझै पनि हावी हुन खोजेको भन्दै जनप्रतिनिधीहरु आक्रमक देखिएका छन् ।
उनिहरुले यदि सक्ने नै भए सदरमुकाम तम्घास वजारको सार्वाजनिक खोला माथी ठडिएका घरहरु पहिला भत्काएर देखाउन प्रशासनलाई चुनौती दिएका छन् । वर्षऔं भयो तम्घासको जिल्ला कारागार देखि पुतली वजार सम्मको खोला मिचेर घर बनाई रहेको विषय यहाँका पत्रकारहरुले उठाउन थालेको तर प्रशासन मौन रएको छ ।
तम्घास खोला मिच्दै घर बनउँदै जादा पानी बग्न नसकेर कतिपय स्थानमा ताल बनेर प्रदुषण बढेको छ । त्यसबाट अत्यन्तै वातवरणिय असर समेत परेको छ । प्रशासनिक निकायकै आँखा अगाडी यस्तो निरहितापन देखाईनु तर गाउँ कि ति निर्दा महिलाको भने प्रशासनिक शक्ति प्रदर्शन गरिनु लज्जास्पद् भएको यहाँको सरोकारवलाको टिप्पणी गरेका छन् ।
बागलुङमा रंगहरुको पर्व फागु (होली) एकापसमा रंग दलेर सद्भाव एवं उल्लासपूर्वक मनाउन सुरु !
ब्रह्माकुमारी इश्वरीय विश्व विद्यालय बागलुङमा होली कार्यक्रम सम्पन्न !